ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကျင်းပ
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကို အစီအစဉ် (၁၄) ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမနေ့ အစီအစဉ်ကို ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Tom Malinowski နှင့်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ဇမ္ဗူသီရိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အလုပ်သမားရေးရာ ဆိုင်ရာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Tom Malinowski နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) မှ Mr. Tom Cormier ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင်အထည်ဖော်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) မှ Mr. Tom Cormier ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် (I-1) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။
​ပါလီမန်ဘက်ဂျက်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အစီအစဉ်ဖြင့် အာဆီယံပါလီမန်များဆိုင်ရာ ညီလာခံ(AIPA)၊ ဂျာမန်ဖောင်ဒေရှင်း GIZ တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပါလီမန်ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (Workshop on Parliamentary Budgeting and Transparency)ကို ဇွန်လ၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Hotel Royal ACE ၌ ကျင်းပသည်။
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ကျင်းပ
ပထမအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ကို အစီအစဉ် (၈) ခုဖြင့် ကျင်းပပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် စတုတ္ထနေ့ အစီအစဉ်ကို ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Tateshi HIGUCHI အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Tateshi HIGUCHI အား ဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက၊ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူMr. Roland KOBIA ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဒုတိယနာယက ဦးနန္ဒကျော်စွာသည်ဥရောပသမဂ္ဂ၏ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူMr. Roland KOBIA ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဇွန်လ ၁၇ ရက်နေ့ နံနက်(ဝ၉၀ဝ)နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် (I-1) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။